Pdf.to Imigomo Yesevisi
Ngokufinyelela iwebhusayithi ku- https : //pdf.to , uyavuma ukuthi uboshiwe ngale migomo yesevisi, yonke imithetho esebenzayo nemithethonqubo, futhi uyavuma ukuthi unesibopho sokuhambisana nanoma yimiphi imithetho yendawo esebenzayo. Uma ungavumelani nanoma yimiphi yale migomo, awuvunyelwe ukusebenzisa noma ukufinyelela kule sayithi. Izinto eziqukethwe kule webhusayithi zivikelwe ngumthetho we-copyright nomthetho wokuthengisa.
Imvume inikwe ukukopisha okwesikhashana ikhophi eyodwa yezinto (ulwazi noma isofthiwe) ku-Pdf.kuwebhusayithi yomuntu siqu, okungekho kwezokuhweba okwedluliselwa kuphela. Lokhu kunikezwa kwelayisense, hhayi ukudluliselwa kwesihloko, futhi ngaphansi kwalesi senisi kungenzeka:
uzame ukuqeda noma ukushintsha kabusha injini noma iyiphi isofthiwe equkethwe kwi-website ye-Pdf.to;
ususe noma yiliphi ilungelo lobunikazi noma ezinye izinkampani zokwaziswa okuvela kumpahla; noma
ukudlulisela izinto kumunye umuntu noma 'esibukweni' izinto ezikhona kunoma iyiphi enye iseva.
Leli layisensi izoqeda ngokuzenzakalelayo uma uphula noma iyiphi yalezi zithibelo futhi ingaqedwa ngu-Pdf. nganoma isiphi isikhathi. Ekuqedeni ukubukwa kwakho ngalezi zinto noma ekuqedeni le layisensi, kufanele uchithe noma yiziphi izinto ezilandiwe ezithandweni zakho noma ngabe usekhompyutheni noma ephrintiwe.
Izinto ezitholakala kwi-website ye-Pdf.to zinikezwa ngokusemthethweni njenge '. I-Pdf.to ayinalo iwaranti, evezwe noma ekhonjisiwe, ngakho-ke iyalahla futhi ilahla zonke ezinye iziqinisekiso ezibandakanya, ngaphandle kokunciphisa, iziqinisekiso zemali noma izimo zokuthengisa, ukufaneleka komsebenzi othile, noma ukungaphili kwempahla yengqondo noma ukuphulwa kwamalungelo.
Ngaphezu kwalokho, i-Pdf.to ayivumeli noma yenza noma yiziphi izethulo eziphathelene nokunemba, imiphumela, noma ukwethenjwa kokusetshenziswa kwezinto ezikuyobhusayithi yayo noma okunye okuphathelene nezinto ezinjalo noma kunoma yiziphi izingosi ezixhunywe kule sayithi.
Ngeke kwenzeke ukuthi i-Pdf.to noma abahlinzeki bayo bayobophezeleka nganoma yimuphi umonakalo (kubandakanya, ngaphandle kwemingcele, umonakalo wokulahlekelwa kwedatha noma inzuzo, noma ngenxa yokuphazanyiswa kwebhizinisi) ngenxa yokusetshenziswa noma ukungakwazi ukusebenzisa izinto ezisePdf.to iwebhusayithi, noma ngabe i-Pdf.to noma i-Pdf.mmeleli ogunyaziwe iye yaziswa ngomlomo noma ngokubhala ukuthi kungenzeka umonakalo onjalo. Ngenxa yokuthi ezinye iziphathimandla azivumeli ukulinganiselwa kumawaranti, noma ukulinganiselwa kwecala lokulimala okunemiphumela noma okulimazayo, lezi zimingcele zingase zingasebenzi kuwe.
5. Ukuchithwa kwempahla
Izinto ezivela kwi-website ye-Pdf.kungafaka phakathi amaphutha ezobuchwepheshe, we-typographical, noma wezithombe. I-Pdf.to ayivumeli ukuthi yiziphi izinto ezikuyobhusayithi yayo enembile, ephelele noma yamanje. I-Pdf.to ingenza izinguquko ezintweni eziqukethwe kwiwebsite nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso. Noma kunjalo i-Pdf.to ayizibophezele ekuvuseleleni izinto.
I-Pdf.to ayizange ibuyekeze wonke amasayithi axhunyiwe kwiwebhusayithi yayo futhi ayenawo obhekene nokuqukethwe kwanoma iyiphi isayithi elinjalo elixhunyiwe. Ukufakwa kwanoma yikuphi ukuxhumanisa akusho ukugunyazwa yi-Pdf.kusiza. Ukusetshenziswa kwanoma iyiphi i-website enjalo exhunywe kungengozi yomsebenzisi.
I-Pdf.to ingabuyekeza le migomo yesevisi ngewebhusayithi yayo nganoma isiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso. Ngokusebenzisa lewebhusayithi uyavuma ukuthi uboshiwe yi-version yamanje yale migomo yesevisi.
Le migomo nemibandela ilawulwa futhi ilandwe ngokuhambisana nemithetho yaseConnecticut futhi uhambise ngokungenakuqondisa igunya elilodwa lamakhotho kuleyo ndawo noma indawo.
Abahlanganyeli bezinsizakalo zePDF.to bayalayisha, baguqule, bafinyelele futhi basebenzise izinto zokwakha kanye nezinsizakalo ngokuzibeka engcupheni. I-PDF.to ayikuqapheli okuqukethwe kwamakhasimende. I-PDF.to ngeke ibe nesibopho sokukhokhelwa okukhokhelwe ngenxa yamasevisi e-PDF, ulwazi, noma imikhiqizo. Umbambiqhaza ngamunye unesibopho sazo zonke izinto ezigcinwe ngePDF.to, ngokunemba kwezinto ezibandakanya amawaranti, kanye nokuthola konke ukugunyazwa okudingekayo kwama-hyperlink nezinto zokumaketha. I-PDF.to ayenzi iwaranti ecacile noma ebekiwe mayelana nokunemba, ikhwalithi, noma uhlobo lolwazi olungatholwa abasebenzisi noma ababambiqhaza kwi-inthanethi ngokusebenzisa izinsiza zePDF.to.
Sicela wazi futhi ukuthi konke ukulayishwa komsebenzisi nokuqukethwe kuyasuswa kungakapheli amahora okulayishiwe, futhi i-matieral yabo eguquliwe iyasuswa kungakapheli namahora angamashumi amabili nane futhi, ngomqondo wokugcina kuphela okwesikhashana
Uma ukholelwa ukuthi noma ikuphi okubhalwe ku-PDF.ephula noma iyiphi i-copyright okungeyakho noma oyiphethe, ungathumela isaziso esibhaliwe se-Alleged Copyright Copyright ("Isaziso") kummeli wethu we-Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") okhonjwe ngezansi . Esazisweni, kufanele:
(A) Thola ngemininingwane eyanele umsebenzi onelungelo lobunikazi noma impahla yengqondo oyimangalele yokuthi yephuliwe ukuze sikwazi ukuthola okokusebenza;
(B) Khomba i-URL noma enye indawo ethize ku-PDF.to equkethe okokusebenza okufuna ukuthi kwephula i-copyright yakho;
(C) Nikeza ngesiginesha ye-elektroniki noma ebonakalayo yomnikazi welungelo lobunikazi noma umuntu ogunyaziwe ukuba enze izinto egameni lomnikazi;
(D) Faka nesitatimende sokuthi unokholo oluqinile lokuthi ukusetshenziswa okuphikisanayo akugunyaziwe ngumnikazi we-copyright, umenzeli wakhe, noma umthetho;
(E) Faka nesitatimende sokuthi imininingwane equkethwe kwisaziso sakho inembile futhi iyafakazela ngaphansi kwesijeziso sokuqamba amanga sokuthi ungumnikazi we-copyright noma ugunyaziwe ukuthatha isinyathelo egameni lomnikazi we-copyright; futhi,
(F) Faka igama lakho, ikheli leposi, inombolo yocingo kanye nekheli le-imeyili.
Ungathumela Isaziso sakho Kummeli wethu we-DMCA oqokiwe nge-imeyili, ifeksi, noma ngeposi njengoba kushiwo ngezansi:
UCharles Lee Mudd Jr.
Umgwaqo u-411 S. Sangamon
Ifeksi ku: 312-803-1667
Lapho i-PDF.to ithola Isaziso esifanele, isusa ngokushesha noma ikhubaze ukufinyelela ezintweni ezisolwa ngokwephula umthetho futhi inqamula ama-akhawunti ahambisana nalokho (uma kufanele) ngokuya nge-DMCA.
I-PDF.to yamukele inqubomgomo yokunqamula, ezimeni ezifanele nangokuzikhethela kwayo, amalungu athathwa njengabephula umthetho ngokuphindayo. I-PDF.to ngokuqonda kwayo kuphela ingakhawulela ukufinyelela ku-PDF.to futhi / noma inqamule ukusetshenziswa kwayo yinoma ngubani owephula noma yimaphi amalungelo empahla yabanye, noma ngabe kukhona ukwephulwa okuphindaphindiwe noma cha.
I-PDF iye kwiWebP
I-PDF eya ku-GIF
253,649 ukuguqulwa kusukela ngo-2019!
Xhumana nathi - Mayelana NATHI - API - Inqubomgomo yobumfihlo - Imigomo Yesevisi - Twitter
Yenziwe ngu nadermx - © 2021 PDF.to
Weqe umkhawulo wakho wokuguqulwa wamathathu ngehora, ungaguqula amafayela akho abe yi- 59:00 noma bhalisa bese uguqula okuningi manje.
Ukusebenza kwe-Batch kutholakala kuphela kubasebenzisi be-Pro. Thuthukisa manje ukucubungula amafayela amaningi ngasikhathi sinye.
Thola ukufinyelela okungenamkhawulo noma zama ifayela elilodwa